इन्द्रबहादुर राईको कथा : खीर::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
शुक्रबार, माघ ४, २०७५ | Friday 18th January 2019
इन्द्रबहादुर राईको कथा : खीर
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, फाल्गुन २३, २०७४
त्यतिबेला मैले त्यस घटनालाई बुझ्नै सकेको थिइनँ, त्यसको केही अर्थ होला भनेर मैले सोच्नै सकेको थिइनँ। घटना, घटना नै भनूँ, यस्तो भएको थियोः
हररर आवाज गर्दै टिस्टा बगेको वर्णन मैले कथाहुँदो धेरै ठाउँ र उपन्यासमा पनि धेरै नै पल्ट पढिसकेको लेखिसकेको भए पनि साँच्चै टिस्टाले बहँदै कराएको मैले धीत मारेर सुन्न पाएको थिइनँ। मध्यदिन र मध्यरातमा स्वाँ… लामो ढाक्दो आवाज गरेर टिस्टा खोला बास्छ भनेर पनि बर्खा र हिउँदोमा त्यसको बगरतिर काम गर्न जानेहरूबाट सुनेको छु। तर, कालिम्पोङ-गान्तोक जाँदा-आउँदाको हतारमा गाडीदेखि एकछिन उत्रेर पुलमा पुगेको, पानीमा मास्तिर तल्तिर हेरिपठाएको, त्यतिले टिस्टाको आवाज सुन्ने मेरो तृष्णा र भोक अतृप्त नै रहेको थियो।
महान् भन्न मन लाग्ने हरियो-नीलो जलराशिको बग्दो फैलावटमाथिका सुप्त झैं बालुवाहरूमा अनेकौं विगतका करङहरू कोरिएर रहेको, हावाको वेगले पंखा लागेर वरपरका जम्मै झार-जंगलहरू हल्लिरहेको कल्पनाबीच टिस्टाको हररर- भित्र कतै छुट्टै छललल- को आवाज, कतै भिन्दै भुरुरुरु-हरू पनि भएको र बजेको याद आउँथ्यो…। गान्तोकबाट फर्किएको त्यस दिन त्यसै र त्यहीँ टिस्टामा मैले बास पारेको थिएँ।
डाकबंगलाको कोठाहरू मरम्मत गरिँदै रहेछ र मलाई दिइएको कोठा पनि हालै चुना पोतिएको आलो गन्धको र चहकिलो सेतो असजिलो थियो। छेवैको सटेको कोठामा जम्मै डाकबङ्गला मरमत गर्ने बढाई, राज, रङवाला र कुल्लीहरूले डरा बनाएका रहेछन्। तिनीहरू नै हुन् यस कथाका घटना। विशेष दिन बनाएर आज तिनीहरू कोठाभरि थुप्रेका थिए, उछिनी-उछिनी कुरा गरिरहेका थिए, केही पकाइरहेका थिए र बात त्यैमाथि भइरहेको थियो, तिनीहरूले खीर पकाइरहेका थिए।
खानेकुरोको कुरा गरेको मन पर्दैन मलाई। तरै पनि केही नलागेर सुनिरहेँ। दैलोदेखि बाहिर मध्यदिन बितिसकेको चकमन्नको उज्यालो थियो। पलङमाथि बेडिङ फैलाएपछि फेरि फर्केर बाहिर हेर्दा एक्कासि बढ्ता बेलुका पसिहालेको अर्कै रङको उज्यालो रूखका पात र हाँगाका अभेक ठाउँहरूलाई पनि छोइराख्न पुगेको थियो।
‘खीर खानु नै हो भने, एक पावा चामललाई दुई सेर दूध चाहिन्छ’, ओढार परेका चङ्कला आँखाको चित्र दिने एउटा सोरले किटान गरी-गरी भनिरहेको थियो- ‘यति हाम्रो चामललाई दस सेर दूध चाहिन्छ। कति सेर हाल्यो ?’
‘कति सेर हाल्यो र? चार सेर त हाल्यो।’
‘टिस्टा जस्तो जग्गामा चार सेर नाथु दूधको खीर खाएको, थुक्क!’ त्यही अघिको सोरले भन्यो।
‘चार सेर दूध हालेको खीर !’ पनि भन्योः यस्तरी भन्यो जस्तो कि त्यो कुरा कुनै कालो फाटेको टालो हो र उचालेर सबलाई उसले देखाइरहेछ।
‘खीर खानु नै हो भने, धेरै चीज चाहियो,’ एउटा बूढो-बूढो सोर माथि चढ्यो- ‘पहिले त तिमीहरूको चामलै भएन। नुनिया चामल ल्याउनुपर्छ, मसिनो सलसल परेको…।’
‘अलुवा नै किनिसक्नु छैन रै’छ यहाँ।’ गम्म परेको मान्छेको जस्तो सोर बोल्यो- ‘रंगुने अलुवालाई पहाडे चामलसँग झुक्याएर के।’
‘ठिक्क पहाडे बएर्नी जस्तै हुन्छ त्यो मुर्दा।’ अर्कोले सघायो तत्कालै।
‘चीज पाइयो र खीर खाने नै हो भनेदेखि भनेको,’ उसले नहारी भन्दै गयो- ‘नुनिया चामल पुरानो, कालो नुनिया अझ राम्रो, मगमग बासना आउँछ, दसबाह्र सेर खाँट्टी दूधमा पकाउनू। पानी-दूध त पन्द्रह सेर लाग्छ। पाँच सेर पानी सुकाउनुलाई पकाउँदा-पकाउँदा चामल जति फुटेर अब लिटो भइसक्छ, खोले। मुठी पारेको जस्तो बाक्लो दूध छ भने सिता सग्लोसग्लै बसेको ठर्रो खीर हुन्छ।
खोले खीर त मुनि डढिसक्छ, भरै जम्मै डढेको गह्नाउँछ, मुनिको पर्नेलाई… …’
दाँत माझेको जस्तो हुन्छ भन्यो कि के भन्यो अर्कोले मैले राम्रो सुनिनँ।
एक छिनपछि अर्कै एक स्वर एक छेउदेखि उम्ल्यो- ‘दूध मात्रै ओइराएर हुन्छ? पेस्ता चाहिन्छ, किसमिस, हाडे बदाम, दालचिनी, नरिवल, तेजपात, ल्वाङ जुटाउनुपर्छ। ठिक्कको धीमा आँचमा पकाउनुपर्छ। किसमिस पनि छोड्नुपर्छ। अघाडि छोड्दा फुट्छ।’
‘त्यो सब हालेर के हुन्छ -‘ एउटा उत्सुक सुरिलो स्वरले सोध्यो।
‘स्वादको लागि।’- ‘बास्नाको लागि।’- ‘तागतको लागि।’- झ्याउँ-झ्याउँती त्यसलाई सबले कराए।
‘पल्केलास्।’ अझै त्यही भत्सर्नाको रहलपहलजस्तो कसैले भन्दै थियो- ‘सपनातिर खीर खोजिहिँड्लास्। त्यसरी मन बुझाउलास्।’
‘त्यसरी यहाँ खीर पकाएको छ भने बास्ना उः पर बाटोमा हिँड्नेको नाकमा लाग्छ,’ अर्कोले भन्यो।
याद गरेर यति बेला मैले तिनीहरूको खीरको बास्ना सुँघ्ने बल गरेँ, पटक्कै पाएको जस्तो लागेन।
‘तेरो खीर, यहीँ बसेको हामीलाई त बास्ना आउँदैन।’ बूढाले भनि पनि हाल्यो।
‘क्यै नहेरी, गज्जबकै खीर खाऊँ भन्दा तिमी नै पैसा निकाल्नु मान्दैनौ,’ प्रतिवादमा आयो उत्तर- ‘चोरेर होस्, कमाएर होस्, अर्काको ऋण नतिरेरै होस् जसरी पनि खाइहालेर बाँच्दै गर्नुपर्छ, बाँचिरहनु सक्नुपर्छ।’
सब जना सामसुम भए।
त्यही सामसुमलाई म पनि रुङिरहेको रहेछु। विरोधमा उठेर म आहट दिँदै यता कोठामा टहल्नु थालेँ। फेरि मेरो उपस्थितिको यो घोषणाले ठूलो ढुंगा लडेर आएकाले झैं उनीहरूको बातचितको खोलालाई अलि अर्कैतिर फर्काइदियो।
‘सब चीज जुक्ताएर मात्रै कहाँ हुन्छ, पकाउने सीप हुनुपर्छ’ एउटाले थाल्यो, सेतो बाफ जस्तो।
‘जैलेसुकै खीर खाएर पनि त भएन, समय पारेर, आफूलाई विचारेर खानुपर्योा,’ अर्कोले थप्यो।
‘उसो भए मुस्किल रै’छ खीर खानु !’ तेस्रोले तीतो करायो- ‘असम्भव रै’छ।’
हाँसो अलि-अलि रोक्न नसकी मैले बाहिर हेरेँ। सब सामान्यजस्तै थियो। साँझका काला रूखहरू नहल्लिई उभिरहेका थिए।
‘चलाऊ-चलाऊ ऐले डढ्छ यै पनि !’
‘पाक्यो होला, अब त,’
‘पाक्यो, पाक्यो !!’
‘त्यतिको पाकेकै हो।’
‘पाकेछ-पाकेछ,’ भएर भाँडा उतारियो। अलि परपर सबै जना हटेको र एक-दुईले ठाउँ रोजेर ओगटेको अनुमान आयो।
खाँदाखाँदै एक जनाले सोध्यो- ‘के-के गन्हाएको जस्तो लाग्छ?’
‘दाउरा हो दाउरा, अग्गिदेखि म खुब याद गर्दै छु।’ कुन्नि कसले भन्यो। शंका मर्दै बौरँदै गरिरह्यो।
‘चिनी लागेनछ।’ भनेर एक जनाले एक-दुई कदम हिँडी चिनी ल्याई आफ्नो भागमा छर्‍यो।
‘खीरमा खानु नै हो भने,’ फेरि त्यही सुरुमा कुरा पकाउने मान्छे खाँदै बोल्दै थियो- ‘चिनी होइन, खीरमा गुँड हाल्नुपर्छ। रङ निस्किन्छ।’
‘गुँड पनि कालो गुँड होइन, खजुरको पाना-पाना परेको सफा गुँड हालेको मात्रै रसिलो हुन्छ।’ दोस्रोले लगत्तै सुधार्‍यो- ‘कालो गुँड हालेको त कसरी खानु, छ्या।’
‘छ्याः है, कति खानुको कुरा गरेको? कति दिनमा के खीर खाएको हो-होइन, बडे-बडे कुरा हाँकेर… मलाई त कुरीकुरी लागिसक्यो।’ यो भन्नेले यता मलाई सुनाएर ग्लानि कम गर्न खोजेको थियो मैले बुझेँ।
एक-दुई गाँसमा तिनीहरू व्यस्त भए।
‘चिनी हालेको गुलियो दूध-भात जस्तो मात्रै भएछ।’ मोटो सोरले भन्दा जम्मै तिनीहरू एक्कासि हाँसिनिस्के। पकाउनु सिपालु सोर सबभन्दा लामो हाँसिरह्यो। उसले रोकिँदै हाँस्दै गर्दा सँगै अरूहरू फेरि हाँसे।
आज चार वर्षपछि म त्यो घटनाको अर्थ बुझिरहेछु। तिनीहरूले पकाएको खीर हाम्रो ‘जीवन’ जस्तो रहेछः जीवनलाई यसरी पो बाँच्नुपर्ने, जीवनलाई उसरी पो काममा लगाउनुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने थुप्रै-थुप्रै आदर्शहरू हाम्रा मनभरि छन् तर साँच्चैमा बाँच्दाका भूल अपुग र भत्कोसहरूले नछोड्ने हाम्रो यो यथार्थ जीवन तिनीहरूकै खीर जस्तो भइरहन्छ जुन तिनीहरूले कुरा गरेको आदर्श खीरको व्यङ्ग्य जस्तो मात्र थियो।
जीवन के टिस्टा जस्तो नहोला, जुन जहाँ जसरी बगे पनि आदर्श नै छ?
– ‘कथास्था’ (सन् १९७२) संग्रहबाट
नेविसंघ उभियो सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको पक्षमा, माफियाविरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा
ओली सरकारविरुद्ध चर्कियो आन्दोलन, सडकमा उत्रिए जनता
चुनाव जितेका कम्युनिस्ट नेताको नक्कली मुकुन्डो उत्रियो, चोरी गरेपछि परे पक्राउ
ज्यानको बाजी थापेर वीपीलाई बचाउने कांग्रेसका सेनानीको निधन, अन्त्यष्टिमा पुगे रामचन्द्र
सर्वाेच्च अदालतबाटै लाग्यो कम्युनिस्ट सरकारलाई झड्का, ओली र प्रचण्डको ठूलो योजनामा ‘ब्रेक’
नेकपामा ठूलो विद्रोह : नेतृत्वमाथि आरोपै–आरोप, गृहमन्त्री बादल र रविन्द्र अधिकारीलाई हटाउन दबाब
विवादित राजदूत लक्की शेर्पाको यस्तो चाल ! किन पुगिन् फेरि अस्ट्रेलिया ?
कांग्रेसले आज ओलीको सातो लिने, व्यापक तयारी हुँदै, अन्ततः कठघरामा उभिनैपर्ने भयो
डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि रातारात काठमाडौं ल्याइयो, आत्तियो कम्युनिस्ट सरकार
कम्युनिस्ट सरकारले लोकसेवा आयोगको अपमान गरेको खुलासा, कर्मचारी बढुवामै समस्या
भीम रावलले गरे ओलीमाथि आरोपको वर्षा, वालुवाटार र खुमलटारमा तरङ्ग
कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नै मन्त्रीहरुको तलव सुविधाबारे गर्यो नयाँ व्यवस्था